HomeBank: Ihe Nweta Akaụntụ Akaụntụ Onwe Na-emeghe ma Na-emeghe | Site na Linux
Nke a si mmefu kwa ụbọchị na mmefu kwa afọ, dị ka ụgwọ iwu, ịkwụ ụgwọ kaadị, nkwụnye ego ụlọ akụ na ndi ozo anyị ga-agba mbọ pụrụ iche icheta ihe niile gbasara ego. Agbanyeghị, ihe ọghọm nke ịhapụ kredit ma ọ bụ ụbọchị ịkwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ na-adị mgbe niile. Maka ụdị ọnọdụ a, anyị nwere ike iji HomeBank.
HomeBank bụ njikwa njikwa ego nke onwe onye edere n'asụsụ mmemme C yana njirimara eserese ya na-eji GTK +Na mgbakwunye, HomeBank bụ n'efu, mepere emepe wepụtara n'okpuru GPL mbipute 2 na obe-ikpo okwu.
1 HomeBank Njirimara
2 Etu esi etinye HomeBank na Linux?
3 Olee otu iji Homebank?
HomeBank dị mfe iji na jupụtara charting na akuko nhọrọ, nwere a set nke atụmatụ yiri ihe ị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ ndị ọzọ: mbubata site na Quicken, Microsoft Money, ma ọ bụ usoro ndị ọzọ a na-ahụkarị, nchọpụta azụmahịa abụọ, ọtụtụ ụdị akaụntụ, kewaa azụmahịa, ngwa mmefu ego, na ndị ọzọ.
Ọzọkwa na-enye anyị ohere ịkọwa edemede iji kọwaa ma kọwaa azụmahịa ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-azụ ihe, na-ebu mmanụ ụgbọala, wdg. Nwere ike ịmepụta ma kenye otu ụdị ụdị azụmahịa ọ bụla. Ọbụghị naanị na nke a na-enyere gị aka ịmata azụmahịa ọ bụla ọsọ ọsọ, ọ na-enyekwa gị ike ịhazi, nyocha, na nyocha ma emechaa.
HomeBank na-echekwa data gị na faịlụ a na-akpọ obere akpaYa mere, ịmalite iji ya, oge mbụ ị na-eji ngwa ahụ ị ga-emerịrị obere akpa ọhụrụ wee jupụta na akaụntụ, ndị na-erite uru na edemede.
n'etiti The isi atụmatụ na anyị nwere ike mata nke a ngwa nwere ike ịchọta:
Nwere ike mbubata data si CSV, OFX, QIF na Amiga. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ibupụ data HomeBank gị na usoro QIF.
Nwere ike ibipute niile iche iche nke HomeBank akụkọ, gụnyere mmefu ego, overdrawn eme, omume oge, na ọnụ ọgụgụ. I nwekwara ike idowe ndekọ nke azụmahịa akpaghị aka.
Can nwere ike ime ka ojiji nke ya dị iche iche grafụ na nzacha ngwaọrụ.
Ọ na-akwado asụsụ mba iri abụọ na isii.
HomeBank, ngwanrọ na-aza ajụjụ dị na Microsoft Windows, FreeBSD, na GNU / Linux. Onye ọzọ nyefere ya NMacOSX.
Imirikiti ndị ọrụ Linux nwere ike ịchọta ụdị ngwugwu na nchekwa ha.
Etu esi etinye HomeBank na Linux?
N'ihi nnukwu ewu ewu nke ngwa ahụ enwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ nkesa Linux ya mere ntinye ya na sistemụ anyị dị mfe.
N'ihe banyere ọrụ nke Debian ma ọ bụ usoro ọ bụla dabere na ya nwere ike iwunye HomeBank na:
Mgbe maka ndị bụ ndị ọrụ Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ sistemụ Ubuntu ọ bụla ga-agbakwunye ebe nchekwa ndị a na sistemụ gị, maka nke a, anyị ga-emeghe ọnụ na Ctrl + Alt T wee mee ya n'ime ya:
Anyị na-emelite ndepụta anyị nke nchịkọta na nchekwa
N'ikpeazụ, anyị wụnye ngwa ahụ na:
para Ndị ahụ bụ ndị ọrụ OpenSUSE nke ụdị ya ọ bụla, wụnye ya:
Si ị bụ Gentoo onye ọrụ ị nwere ike iwunye ngwa a na iwu ndị a:
Mgbe maka ndị bụ ndị ọrụ Mandriva wụnye:
Ọ bụrụ na ị na-eji Arch Linux, Manjaro, Antergos ma ọ bụ nkesa ọ bụla dabere na Arch Linux ị nwere ike iwunye na:
N'ikpeazụ, Maka ndị bụ ndị ọrụ Fedora, CentOS, RHEL ma ọ bụ nkesa ọ bụla sitere na ndị a, ị wụnye:
Olee otu iji Homebank?
Dị ka ekwuru na mbụ ọ dị mkpa ịmepụta obere akpa na ngwa nke site na mgbe ahụ anyị nwere ike ịmalite igosi ụdị mmefu, azụmahịa, ịkwụ ụgwọ na ndị ọzọ.
Maka nke a anyị ga-agarịrị na menu ngwa ahụ "Njikwa -> Ọhụrụ" ebe a ka anyị nwere ike ịmepụta obere akpa ọhụrụ.
Nhọrọ, nwere ike ezipụta obere akpa Njirimara, dị ka aha onye nwe ya, site na ịhọrọ Njikwa -> Njirimara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » HomeBank: ntinye ego eji emeghe ego na emeghe